Loza voajanahary: nihorohoro ny tany tao Manjakandriana | NewsMada
Loza voajanahary: nihorohoro ny tany tao Manjakandriana
Naheno horohorontany ny ankamaroan’ny mponina teto Antananarivo sy ny manodidina, ny talata maraina teo. Nanamarina izany ny teknisianina tetsy amin’ny Ioga Ambohidempona. Nisy ny fihetsehan’ny tany, ny talata tamin’ny 6 ora sy sasany maraina. Nahatratra 4,7 amin’ny mari-drefy Richter, izany horohorontany izany. Tany amin’ny 16,57 km avaratr’I Manjakandriana, 23km atsimon’i Mangamila no nisy ny foiben’ity horohorontany ity.
Nanamarika ny manam-pahaizana fa misy isan’andro ny fihetsehan’ny tany, saingy tsy henon’ny olombelona izany satria maivana. Rehefa tafakatra 4 amin’ny mari-drefy Richter, izany fihetsehana izany, vao tsapan’ny olona.
Tsiahivina fa tamin’ny volana janoary no nisy fihetsehan’ny tany mahery, nahatratra 6 amin’ny mari-drefy Richter. Nisy ifandraisany tamin’ny fihetsehan’ny tany tao Mayotte, io tamin’ny volana janoary io, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra hatrany.